ကိုဗစ်ကြောင့် ဗီတာမင်ဒီကို နာမည်မပျက်စေလို . . . - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်ကြောင့် ဗီတာမင်ဒီကို နာမည်မပျက်စေလို . . .
ကိုဗစ်ကာလမှာ ဗီတာမင် ဒီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများက သတိထားမိလာကြပါတယ်။ သတိထားမိရုံတင် မဟုတ်၊ လူမြင်တာနဲ့ ဗီတာမင်ဒီသောက်ရမလားဆိုတာပါ ခဏခဏအမေးခံရပါတယ်။ တကယ်က ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက ဗီတာမင်ဒီကို သူ့နေရာနဲ့သူ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ပေးပြီးသားပါပဲ။ ဗီတာမင်ဒီက သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးပါ။ နည်းနည်းလောက် လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဗီတာမင်ဒီဆိုတာ တကယ်တော့ misnomer နာမည်မှားပေးတာပါတဲ့။ တကယ်တော့ သူက ဟော်မုန်းနွယ်ဝင် ပစ္စည်းလေးပါ။ ထားပါတော့ ။ ဗီတာမင်ဆိုလည်း ဗီတာမင်ပေါ့။ ဗီတာမင်မှာမှ သူက အဆီမှာပျော်တဲ့ ဗီတာမင်ပါ။ ရှူးရှူးပေါက်ပြီး အပြင်ထုတ်လို့ မရတဲ့ ဗီတာမင်ပေါ့။ ဗီတာမင်တွေထဲမှာတော့ သူက စူပါစတားပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့
အရိုးတွေ သန်မာဖို့ ဗီတာမင်ဒီ လိုတယ်လေ။ အရိုးမှာ ရှိတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတာ ဗီတာမင်ဒီကို မှီခိုနေရတာကိုး။
ဒါကတော့ ဘယ်သူ့မေးမေး သိတဲ့အချက်ဆိုတော့ ထားပါတော့။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗီတာမင်ဒီက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတာက သူက
ဆဲလ်တွေ ရောင်ရမ်းပျက်စီးတာကို သက်သာစေတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းပေးတယ် စတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပါ တွေ့လာရတာကြောင့်ပါ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ တခြားဘာကောင်းကျိုးတွေ ရှိလဲဆိုတာကို လေ့လာနေကြတာလဲ ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ။ ခုဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်အပါအဝင်ပေါ့။ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်လား၊ ကုသနိုင်လားဆိုတာကိုလည်း အကြိတ်အနယ်လေ့လာပြီး စာတမ်းတွေ အများကြီး ပြုစုနေကြတုန်းပါပဲ။
ဗီတာမင်ဒီကို ဘယ်လိုပေးသလဲ။ ဘယ်သူတွေကို မဖြစ်မနေပေးသလဲ။
ဗီတာမင်ဒီကို ပေးမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေက ၃ချက်ကို စဉ်းစားရပါတယ်။
ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြနေပြီလား။
သွေးထဲမှာရော တကယ်နည်းနေပြီလား စတဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားရပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့နိုင်ခြေ ရှိတဲ့သူဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ။
-အာဟာရချို့တဲ့တဲ့သူတွေ (အာဟာရချို့တဲ့ပြီး ဗီတာမင်ဒီတင်မက တခြားအာဟာရတွေပါ ချို့တဲ့နေတဲ့သူတွေ)
–နေရောင်နဲ့ မထိတဲ့သူတွေ (တစ်နေကုန် အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့သူတွေ)
-အသက် ၆၅နှစ်အထက်တွေ (အသက်ကြီးလို့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ ခက်လို့ နေရောင်ခြည်မရတဲ့အပြင် အရေပြားကလည်း ဒီအရွယ်လောက်ဆို နေရောင်ကို ကောင်းကောင်းမစုပ်ယူနိုင်တော့ပါဘူး)
-အဝလွန်တဲ့သူတွေ BMI>၃၀နဲ့အထက်တွေ (ဝလေလေ ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့လေပါပဲ)
-အသားအရောင်ရင့်တဲ့သူတွေ (အသားအရောင်ရင့်လေလေ ဗီတာမင်ဒီစုပ်ယူမှု နည်းလေလေပါ၊ နေရောင်ထဲမှာ အမြဲနေရတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါတယ်)
-အစားအသောက်ထဲက ဗီတာမင်ဒီစုပ်ယူမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါရှိသူတွေ (ဥပမာ ပန်ကရိယရောင်တာ၊ အူက မစုပ်ယူနိုင်တာ)
-အသည်း၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့သူတွေ (ကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင်ဒီကို သုံးလို့ရအောင် အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းရတာကြောင့်ပါ)
-ဗီတာမင်ဒီကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ဆေးဝါးတွေကို စွဲသောက်နေရတဲ့ သူတွေ (ဥပမာ အတက်ကျဆေး၊ ဂလူကိုကော်တီးကွိုက်)
ဒီအချက်တွေ ရှိနေရင် သင်က သူများထက် ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဆိုတာကရော
-ကလေးတွေမှာဆို ricketsလို့ ခေါ်တဲ့ အရိုးခွင်ပြိး အားပျော့တဲ့ ရောဂါဖြစ်မယ်။
-လူကြီးတွေဆို အရိုးတွေ နာမယ် (အထူးသဖြင့် ခါး)
-အရိုးတွေ အားနည်းပြီး ကျိုးလွယ်မယ်
-ကြွက်သားတွေ နာမယ် (ကြွက်တက်မယ်)
-စိတ်မကြည်ဘူး စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြလာပါမယ်။
ဗီတာမင်ဒီကို သွေးထဲမှာ တိုင်းချင်ရင် 25-hydroxyvitamin Dဆိုတာကိုပဲ တိုင်းပါတယ်။ ပမာဏကတော့ တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာဆီပါ။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် <20ng/mlဆိုရင် ချို့တဲ့နေတာ၊ <30ng/mlဆိုရင် မလုံလောက်တာ၊ 30-100ng/mlဆို ပုံမှန်၊ >100ng/ml အထက် (တချို့ကလည်း 150)ဆို အဆိပ်သင့်နေပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။
ကဲ ဒါဆို ဘယ်လိုလူတွေ ဗီတာမင်ဒီကို ဘယ်လောက်သောက်ကြမလဲ။
ကျန်းကျန်းမာမာ လူကောင်းကြီး၊ ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့နိုင်ခြေလည်း မရှိ၊ သွေးထဲမှာလည်း မနည်း၊ ဘာဆေးမှ မပေးပါဘူး။ ဗီတာမင် ဒီကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို စားခိုင်းတယ်၊ နေရောင်ထဲထွက်ခိုင်းတယ်၊ ဒီလောက်ပါပဲ။
ချို့တဲ့နိုင်ခြေတော့ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးထဲမှာတော့ နည်းမနေဘူး။ Maintenance dose (ဖြည့်စွက်ပမာဏ)လို့ ခေါ်တဲ့ မချို့တဲ့ရုံလောက်ပဲ ဖြည့်စွက်ပေးပါတယ်။ ဖြည့်စွက်တာကလည်း အသက်အရွယ်အလိုက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးဆိုရင် တစ်နေ့ ၄၀၀IUလောက်ပေးပါတယ်။ လူကြီးဆို တစ်နေ့ ၁၀၀၀-၂၀၀၀လောက်ပဲ ပေးပါတယ်။
ချို့တဲ့နိုင်ခြေလည်း ရှိတယ်။ ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေပါပြနေပြီ။ သွေးစစ်တော့လည်း နည်းနေပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး ပမာဏ များများပေးပြီး ကုပါတယ်။ ဒါကို treatment dose ( ကုသပမာဏ)လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ လူကြီးဆို တစ်နေ့ကို ၆၀၀၀အားနဲ့ နေ့တိုင်းတိုက်၊ ၆ပတ်ကြာပြန်စစ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်ကို ၅သောင်းအား တစ်ပတ်တစ်ခါတိုက် ၆ပတ်ကြာပြန်စစ်၊ ပြည့်ပြီဆို Maintenance doseပြောင်း ဒီလို လုပ်တာမျိုးပါ။
ဒါက ကိုဗစ်ရှိရှိ မရှိရှိ လူနာလိုအပ်တယ်ဆို ဒီလိုပဲ ပေးပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကုပါတယ်။ လိုမှ ပေးပါတယ်။ လူကောင်းကြီးကို မပေးပါဘူး။ ပေးပြီဆိုရင်လည်း ပြန်ပြန်ခေါ်စစ်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုရင် ကိုယ်ထဲမှာ အောင်းပြီး ဒုက္ခပေးနိုင်လို့ပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဆီးကျောက်တည်တာ၊ မူးဝေအော့အန်၊ ဝမ်းချုပ်တာ စတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့ ဗီတာမင်ဒီကို နှာခေါင်းရှုံ့ကြတာလဲ။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ကိုဗစ်ဖြစ်နေသလား ဗီတာမင်ဒီသောက်လို့၊ ဗီတာမင်ဒီသောက် ကိုဗစ်ကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်များတက်လာရင် ဆရာဝန်တွေ ဘာဖြစ်လို့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ တုံ့ပြန်နေကြတာလဲ။ ဗီတာမင်ဒီ ဒီလောက်ကောင်းတာကိုလေ။
တကယ်က ကိုဗစ်ကာလမှာ ဗီတာမင်ဒီကို သောက်တဲ့သူတွေ များလာတယ်ဆိုတာ ကိုဗစ်ကာကွယ်တယ်တို့၊ ကိုဗစ်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတွေကြောင့်ပါပဲ။ ဒါက မြန်မာမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ စာတမ်းတွေလည်း ပလူပျံနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် စာတမ်းတွေရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ‘ထပ်ပြီး လေ့လာရဦးမယ်’တို့၊ ‘တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးပါ’တို့ တွေ့မှာပါ။ ဆိုလိုတာက ခုထက်ထိ ကိုဗစ်အတွက် ဗီတာမင် ဒီဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ အာမဘန္တေခံပြီး မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
မပြောလည်း ဘာဖြစ်လဲ။ တခြားအားဆေးတွေတောင် သောက်ရသေးတာပဲ။ ဒါလည်း သောက်မှာပဲ။ မရဘူးလား။ ဘာလို့ ဝင်ပြောနေတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဘာလို့ ဆရာဝန်တွေ ဒီလောက် ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်နေတာလဲ။ ဗီတာမင်ဒီကို မုန်းလို့လား။ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗီတာမင် ဒီကို ဝယ်သောက်လာကြတာမှ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက ဆေးတွေတင် မကပါဘူး။ နိုင်ငံခြားက ဆေးတွေပါ မှာသောက်ကြပါတယ်။ ကြုံလို့ ပြောရရင် ဒါတွေက FDA မရှိပါဘူး။ မတော်တဆ သောက်ပြီး တစ်ခုခုဆိုရင် ဘယ်သူ့မှ သွားပြောလို့ မရပါဘူး။ စျေးတွေကလည်း ခေါင်ခိုက်နေတာပါပဲ။ နဂိုကမှ စီးပွားရေးတွေ ကြပ်တည်းနေတာ ဒီဆေးတွေကို သောက်နေရရင် ပိုပြီး ဝန်ပိပါတယ်။ တကယ်တမ်း မနက် ၁၀နာရီနဲ့ နေ့လယ် ၃နာရီကြား နေရောင်ခံမယ်ဆိုရင် ၁၅မိနစ်၊ နာရီဝက်လောက်နဲ့ ရနေတာကြောင့် တကယ်မလိုအပ်ဘဲ စျေးကြီးပေးဝယ်နေတာမြင်ရင် သိပ်အသည်းယားကြလို့ပါ။ ဆေးသောက်ရုံကလွဲပြိး တခြားနည်းလမ်း မရှိရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဟိုလူပြော၊ ဒီလူပြောနဲ့ သောက်ဆိုလို့သာ သောက်နေကြတာ၊ ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာအောင် သောက်ရမှာလဲ၊ ကိုဗစ်ပြီးတဲ့ အထိလား၊ ကိုဗစ်က ဘယ်တော့ ပြီးမှာလဲ၊ ဘာရောဂါတွေ၊ ဘာဆေးတွေနဲ့ မတည့်ဘူးလဲ မသိပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်ရမှာလဲ။ တစ်နေ့တာ လိုအပ်သလောက် ၆၀၀ကနေ ၈၀၀အား လက်ကုန် ၁၀၀၀အားလောက် သောက်တာကို မပြောလိုပေမယ့် ဗီတာမင်ဒီဖြစ်ပြီးရော treatment doseတွေကို အကြာကြီး သောက်နေမိရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကပိုပါတယ်။ ကြုံလို့ပြောရရင် ဗီတာမင်ဒီက mainteance doseကသာ OTCလို့ ခေါ်တဲ့ ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါဘဲ ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးပါ။ treatment doseကတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဝယ်ရတာမျိုးပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဒါမှမသောက်ရင် ကိုဗစ်ကိုက်တော့မလို ပြောနေကြတာပါပဲ။ တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ ဗီတာမင်ဒီပဲ သောက်ရင် အလုံးစုံပျောက်တော့မလိုပဲ ဆိုတော့ ဆီးချိုသမားကလည်း ဆီးချိုဆေး မသောက်တော့ဘူး၊ ဘာလုပ်မှာလဲ ဆီးချိုကောင်းနေတာပဲ။ သွေးတိုးသမားကလည်း သွေးကျဆေးတွေ မဝယ်တော့ဘူး။ ခေါင်းမှမမူးတာပဲ။ ကိုဗစ်မကိုက်ရင်ပြီးရော ဗီတာမင်ဒီပဲ ဝယ်သောက်တော့မယ် ဖြစ်ရော။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဆေးတွေ အများကြီး ဝယ်ရရင် စရိတ်ထောင်းတယ်လေ။ ဒီတော့ သူများတွေ ပြောနေတဲ့ ဗီတာမင်ဒီပဲ သောက်ပြီး ကျန်တဲ့ ဆေးတွေ ဝယ်မသောက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါက တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေပါ။ ကြားထဲက လူနာတွေ သိပ်ကို သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် တတ်နိုင်လို့ သောက်မယ်ဆိုရင်တောင် စနစ်တကျသောက်နိုင်မှ အကျိုးရှိမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ကောင်းကျိုးတက် ဆိုးကျိုးပိုများပါတယ်။
တကယ်ပဲ ဗီတာမင်ဒီက ကိုဗစ်ပျောက်မယ်၊ မကူးအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းပေါ့။ လက်တွေ့မှာ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်လို့ ခုထိ လက်ဆေးပြီး အိမ်ထဲမှာနေနေရတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ပဲ ဆရာဝန်တွေကလည်း ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ကိုဗစ်က ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆို အတင်းကာရော အငြင်းအခုန်တွေ လုပ်နေကြရတာပါ။
ဗီတာမင် ဒီ လုံးဝမသောက်ရဘူးလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီတာမင်ဒီက သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းလို့ပဲ ဗီတာမင်ဒီကို အဆိုးမမြင်စေချင်လို့ ဒီစာကို ရေးတာပါ။ ခုနကပြောသလို ကိုယ့်မှာ ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့နိုင်ခြေတွေ ရှိနေရင်သောက်ပါ။ မသောက်ခင် နေရောင်ခံ၊ အစားအစာတွေနဲ့ လုံလောက်အောင် လုပ်နိုင်မလား။ လုပ်နိုင်ရင် အားဆေးတောင် မလိုပါဘူး။ မလုပ်နိုင်ဘူးလား။ အားဆေးသောက်ပါ။ သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်ပါ။ ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ ရှိနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ကုမှ ရမှာပါ။ ဗီတာမင်ဒီကို ထိထိမိမိသောက်၊ သေချာဆေးစစ်ရမှာပါ။ ဗီတာမင်ချို့တဲ့တာကလည်း လျစ်လျူရှုမရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာပါ။
ခုထက်ထိတော့ ကိုဗစ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီသည် ဘာမှမဆိုင်ပါ။ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မက ကိုယ်တွေ့ဆိုလည်း တစ်ကိုယ်တည်းတွေ့တာမို့လို့ ဆေးပညာမှာ ဘာမှလုပ်လို့ မရပါ။ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ပြည့်မီရုံပဲ သောက်ပါ။ သောက်လို့လည်း ကိုဗစ်ကူးမယ်၊ မကူးဘူး၊ ပျောက်မယ်၊ မပျောက်ဘူး ဘယ်သူမှ အာမမခံပါ။ ကိုဗစ်ကောင်းမှု အကြောင်းပြုပြီး ဗီတာမင် ဒီ နာမည်မပျက်စေလိုပါ။